Dhageeyso,,Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ciidanka xooga uga hambaliyeeyey 60-Guuradii kasoo wareegtay Aas’Aaska Ciidanka xoogga dalka – Radio Baidoa
Maanta oo ay ku beegan 12-ka Bisha April waxaa ay ku asteysan tahay 60-guuradii kasoo wareegtay maalimtii la Aas’aasay Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed,in kastoo maanta dalka aysan ka jirin wax dabaaldeg ah.
Xilligaan oo kale ayaa meelo badan oo kamid ah ayaa waxaa lagu qaban jirey munaasabado loogu dabaal-degayo Aas’aaska Ciidanka xoogga dalka,hayeeshee sanadkaan aan la qabaneyn sababo la xiriira ka hortaga Cudurka Coronavirus.
Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Janeral Odawaa Yuusuf Raage ayaa hambalyo u direy Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed,isaga oo sheegay in aysan jiri doonin munaasabado loogu dabaal degayo Maalinta Ciidanka xoogga dalka.
jeneraal odowaa ayaa sidookale kacodsadey inay lashaqeeyaan ciidanka si loogaaro guulo wax ku ool ah una soo celino sharafkii iyo karaamadii Umadda Soomaaliyeed.
maanta ookale ayaa guud ahaan gobolada dalka soomaaliya lagu xusi jirey 60 sano guurada aas aaska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed balse maanta sababo laxiriira caabuqa corona virus ayaanan laxusi karin si loo bad baadiyo bad qabka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed.